IVivo S1 yaziswa ngokusesikweni kweyoKwindla ephelileyo, njengokuba besesitshilo. Imodeli ngaphakathi kuluhlu oluphakathi lomenzi waseTshayina, olwalubalasele ngokusetyenziswa kwekhamera ebuyisekayo. Uphawu ngoku luyamangalisa ngokusungulwa eIndonesia kwemodeli enegama elifanayo, kodwa uyilo kunye nokucaciswa kwayo akunanto yakwenza nefowuni esiyibonileyo ngoMatshi.
Ke sijonge kwiVivo S1, kodwa inefowuni eyahluke ngokupheleleyo. Ke kuyamangalisa ukuba uphawu lusebenzise igama elifanayo kwesi sixhobo xa lisungulwa e-Indonesia. Yintoni esinokuyilindela kulo mzekelo?
Ngokwendlela yoyilo, itshintsha kakhulu xa kuthelekiswa nemodeli esiyibonileyo ngoMatshi. Kule meko, uphawu lwesiTshayina luthatha indawo yekhamera ebuyisekayo ngenotshi ekubunjweni lwethontsi lamanzi, iphi inzwa yangaphambili yefowuni. Uyilo oluqhelekileyo, esilubona rhoqo kwiifowuni ze-Android.
Uyilo luhlaziyiwe kule meko kwaye kuye kwenzeka okufanayo kunye neenkcukacha zayo. Uphawu lwesiTshayina lutshintsha ngokucacileyo iminxeba, ukuze ibe yenye ifowuni xa kuthelekiswa naleyo yaziswa ngokusemthethweni ngoMatshi. Imodeli elula ngokulula kule meko, kwiinkalo ezithile. Oku kukucaciswa kweVivo S1 entsha:
Isikrini: I-6,38-intshi ye-Super AMOLED enesisombululo esipheleleyo se-HD + (1080 x 2340)
Inkqubo: MediaTek Helio P65
Ikhamera yangaphambili: 32 MP nge f / 2.0 ukuvula
Ikhamera esemva: I-16 MP kunye nokuvula f / 1.78 + 8 MP nge-f / 2.2 ebanzi ye-angle + 2 MP ngokuvula f / 2.4 ubunzulu
Ibhetri: 4.500 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Ukunxibelelana: 4G, iWi-Fi 802.11 b / g / n / ac, iBluetooth 5.0, i-USB 2.0, irediyo ye-FM, i-USB encinci
Abanye: Iscreen somfundi weminwe
Imilinganiselo: 159,53 x 75,23 x 8,13 mm
Ubunzima: 179 gram
Utshintsho kuyilo kwifowuni lucacile kubo bonke. Inkampani iyishiyile ikhamera yayo ebuyisa umva kwaye ukhethe inotshi ekubunjweni lwethontsi lamanzi kule Vivo S1. Ke sele inefowuni eyahlukileyo ngokuthe ngqo kunaleyo bayivelisileyo ngoMatshi walo nyaka. Ukongeza, inzwa ikwadityaniswa phantsi kwescreen sefowuni, olunye utshintsho kuyo. Iskrini siphuculwe, kunye nepaneli ye-Super AMOLED kule meko, ngesisombululo esipheleleyo se-HD +.
Ikhamera kathathu igcinwe kule nguqulo yefowuni, nangona sifumana izivamvo ezahlukeneyo. Kuba belahlekelwe yi-MP ethile apha endleleni kunye notshintsho lweekhamera kule meko. Ukongeza, indlela eziziswe ngayo iikhamera zangemva kule Vivo S1 yahlukile. Ke uyilo lwangasemva lwayo lwahlukile kwimodeli esiyibonileyo ngoMatshi. Ibhetri yenye yezona zinto zibalaseleyo, kunye nomthamo wayo we-4.500 mAh, oza nokutshaja ngokukhawuleza. Kwelinye icala, ukusetyenziswa kweprosesa yeMediaTek kubonakala kule meko, uHelio P65 ngulowo ukhethwe luphawu lwesiTshayina.
Okwangoku, kubonakala ngathi le Vivo S1 iya kuthengiswa kuphela e-Indonesia. Ngapha koko, sele kunokwenzeka ukuba uthenge ifowuni kweli lizwe kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo. Ukuze abasebenzisi kweli lizwe banomdla kule nguqulo intsha inokwenziwa ngayo. Asazi ukuba inkampani inezicwangciso zokuyivula kwezinye iimarike.
Ifowuni iza nohlobo olunye lwe-RAM kunye nokugcinwa (4/128 GB). Kodwa inokuthengwa ngemibala emibini, eyiCosmic Green, iSkyline Blue, onokuyibona efotweni. Malunga nexabiso, Le Vivo S1 isungulwe eIndonesia ngexabiso lama-euro angama-230 kutshintshiselwano. Siza kuzimamela iindaba malunga nokuqaliswa kwale nguqulo kwezinye iimarike, ngakumbi xa kunokwenzeka kubekho utshintsho kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IVivo S1: Uyilo olutsha kunye nokubalulwa komntu wakudala omaziyo
Inye ye-UI 2.0: Umdibaniso omtsha weSamsung weefowuni ze-Android Q